Rooble oo la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee Nairobi (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee Nairobi (SAWIRRO)
Rooble oo la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee Nairobi (SAWIRRO)
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigiisa ku sugan Magaalada Nairobi ayaa gelinkii dambe ee maanta la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi.
Ganacsatada ayaa Ra’iisal Wasaaraha uga warbixiyay ganacsiga Soomaalida ku leeyihiin dalkaasi, iyagoo dhinaca kalena u soo jeediyay talooyin ay u arkaan in lagu hagaajin karo xiriirka labada dal, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.
Qoraalka ayaa u qornaa “Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kulanka oo ahaa mid soo dhaweyn ah ayaa ganacsatada waxa ay uga xog warameen Ra’iisal Wasaaraha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya, horumarka ay sameeyeen iyo caqabadaha haysta xilligan. Ganacsatada ayaa u soo jeediyay talooyin ay u arkaan in lagu hagaajin karo xiriirka labada dal.”
Previous articleWasiir Beyle oo la kulmay Wasiirka Maaliyadda Turkiga
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo dalka dib ugu soo laabtay